भिक्टोरिया तालमा फेरि दुर्घटना, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ सय ३६ पुग्यो
एजेन्सी । भिक्टोरिया फेरी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १ सय ३६ पुगेको छ । अफ्रिका महादेशको भिक्टोरिया तालमा भएको फेरी दुर्घटनापछि ८६ जनाको शव फेला परेको तान्जानियाका अधिकारीले जनाएका छन् । युगाण्डा, तान्जानिया र केन्याको सीमामा रहेको विशाल तालमा रहेको उकारा टापुनजिकै फेरी डुबेको हो । सय जना क्षमताको फेरीमा ३ सयभन्दा धेरै यात्रु सवार […]
एजेन्सी । के तपाईंले कहिले सर्पको मासु चाख्नुभएको छ ? सर्पको मदिराको एकदुई घुट्की नि ? नेपालीहरु धेरैले ‘छैन’ नै भन्नुहुन्छ होला । तर भियतनाममा भने सर्पको मासु खाने चलन छ । सर्प खाने आँट भएका मानिसहरुलाई भियतनाम गज्जबको स्थान हुनसक्छ । जङ्गलबाट समातेर ल्याइएका सर्पलाई काटिन्छ तर जीवितै राखिन्छ । पछि उम्लिरहेको पानी खन्याएर […]
चीनले पनि बढायो अमेरिकी सामानमा कर
एजेन्सी । अमेरिकाले २ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गरेकोे बदलामा चीनले पनि ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सामानमा कर बढाउने घोषणा गरेको छ । चीनले आगामी हप्तादेखि नै कर बढाउने घोषणा गरेको हो । अमेरिकाले झन्डै पाँचदेखि १० प्रतिशत अमेरिकी सामान अर्थात् करिब ५ हजार २ सय अमेरिकी सामानमा […]
एजेन्सी । उत्तर कोरियासंगको तीनदिने शिखर बैठकका लागि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए–इन आज उत्तर कोरिया पुग्नुभएको छ । उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता कीम जोङ–उनले प्योङयाङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दक्षिण कोरियाली समकक्षीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । सडक किनारामा कोरियाली नेतालाई स्वागत गर्न हजारौं उत्तर कोरियाली नागरिकहरु उभिएका थिए भने उनिहरुले उत्तर कोरियाली झण्डाका साथै कोरिया एकीकरणको […]
एजेन्सी । फिलिपिन्समा आएको मङ्खुट नामक आंधीबाट १४ जनाको ज्यान गएको छ । उत्तरी फिलिपिन्सको लुजोन टापुमा १ सय २४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा समुद्री आंधी आएको हो । लुजोन टापुका विभिन्न स्थान जलमग्न भएको र ४० भन्दा धेरै स्थानमा पहिरो गएको छ । आंधीसंगैको भारी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परी अरु दर्जनौं हराइरहेका छन् […]
आइतवार, भदौ ३१, २०७५
अदालतले सुनाएको ५० वर्षको जेल सजाय कुकुरका कारण टर्‍यो
एजेन्सी । अमेरिकाको ओरेगनमा सन् २०१७ मा जोशुआ हार्नरलाई अदालतले बाल यौन शौषणको मामलामा दोषी ठहर गर्यो । तर एक कुकुरका कारण यो घटनामा नयाँ मोड आयो र हार्नर ५० वर्षको सजायँबाट मुक्त भए । यो सबै एक ल्याब्राडोर कुकुर ‘लुसी’ का कारण भएको थियो । ४२ वर्षका हार्नरमाथि एक बालिकालाई यौन शोषण गरेको र […]
अफगानिस्तान सन् २००७ देखि २०१८ सम्म भएका भीषण आक्रमणहरु
काबुल । अफगानिस्तनमा मङ्गलबार भीषण आत्मघाती आक्रमण भएको छ । अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा तालिबानहरु शासन सत्ताबाट बाहिरिएपछि त्यहाँ हुने गरेका प्रायः हिंसा हत्यामा तालिबान आतङ्ककारी समूहको हात रहँदै आएको छ । तर सन् २०१४ पछि इस्लामिक स्टेस (आईएस( आतङ्ककारी समूहको पनि बिगबिगी बढ्न थाल्यो र आईएस समूहले पनि बारम्बार यस्ता भीषण आक्रमण गर्दै आएका […]
बिहिबार, भदौ २८, २०७५
जापानमा शक्तिशाली समुद्री आँधी, १० लाख मानिसले घर छाडे,हवाई सेवा, रेल र डुङ्गा सेवा बन्द
काठमाडौं , २० भदौं । जापानमा २५ वर्ष यताको सबैभन्दा शक्तिशाली समुद्री आँधीको मार परेको छ भने अधिकारीहरूले १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई आआफ्नो घर छाडी सुरक्षित स्थलतर्फ जान भनेका छन्। जेबी नाम दिइएको उक्त शक्तिशाली समुद्री आँधी दक्षिणी क्षेत्रमा जमिनको सम्पर्कमा आएको थियो र त्यसले ठूलो वर्षाका साथै १७२ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेग भएको हावाहुरी पनि […]
चिनले बनायो संसारकै ठूलो टेलिस्कोप, बढायो संसारभर निगरानी (फोटो फिचर)
बेइजिङ्ग । प्रविधिको विकासमा फड्को मार्ने मुलुकको अग्रपंक्तिमा चीन आउँछ नै । उसले विश्वमै नभएका अनौठा अनौठ चीज उत्पादन गर्दै विश्वलाई नै टक्कर दिइरहेको छ । ग्रेट वालकै कारण चीन विश्वमा परिचित छ । हालै तीन तले आकेसे पुल निर्माण गरेको चीनले अहिले पुनः यस्तै अनौठो र अचम्म लाग्दो संसारकै सवैभन्दा ठूलो दुरविन निर्माण गरेको […]
अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानलाई दिने भनिएको ३० करोड अमेरिकी डलर रोक्का
एजेन्सी । अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानलाई दिने भनिएको ३० करोड अमेरिकी डलर रोक्का गरेको छ । पाकिस्तानले आतंकवाद नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सहयोग रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको हो । पाकिस्तानले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएका कारण सहयोग रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कोनी फाकनरले विज्ञप्ति निकाली जानकारी दिएका छन् । […]
दसैं अवधिमा कस्तो रहला मौसम ? यस्तो छ पूर्वानुमान
६ दिनमा उपत्यकाबाट १ लाख ४३ हजार मात्र यात्रु बाहिरिए
४ चरणमा देशभरका अस्पतालमा ६ हजार शय्याको हाइ डिपेन्डेन्सी यूनिट बनाइँदै
यूरोपा लिग फुटबल : एसी मिलानको विजयी सुरुवात
लेबनानका पूर्वप्रधानमन्त्री हरीरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित